नेपालबाहेक विश्वका कुन-कुन देशमा मनाइन्छ दसैं ? - Dhangadhi Khabar
नेपालबाहेक विश्वका कुन-कुन देशमा मनाइन्छ दसैं ?
हिन्दुहरूको महान् पर्व दसैं
हिन्दुहरूको महान् पर्व दसैं नेपालमा मात्र नभएर विश्वका अन्य केही देशमा पनि मनाइन्छ। हिन्दुहरुको बाहुल्यता भएका समुदायले नवरात्रीसम्म विभिन्न शक्ति पीठमा पूजा गर्छन्।
बिहिबार २८, असोज २०७८ १०:०३ मा प्रकाशित
#दसैं #हिन्दुहरूको महान् पर्व दसैं
एसपीएले कोरियाको क्येमयुङ्ग विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने